Ireo mpitsangatsangana tsy vita volo avy any UK, Spain, Portugal, Netherlands, Greece ary Siprus dia tsy maintsy manana fitsapana COVID ratsy mandritra ny 24 ora hiditra any Frantsa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Ireo mpitsangatsangana tsy vita volo avy any UK, Spain, Portugal, Netherlands, Greece ary Siprus dia tsy maintsy manana fitsapana COVID ratsy mandritra ny 24 ora hiditra any Frantsa
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Chypre • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Gresy • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • Vaovao Mafana Portugal • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Nanambara ny praiminisitra frantsay Jean Castex fa esorina ny asabotsy izao ny fameperana ho an'ireo mpandeha vaksiny.
I Frantsa dia mitaky fitsapana coronavirus ratsy mandritra ny 24 ora ho an'ireo mpandeha tsy vita volo avy any UK sy firenena 5 EU.
Ho an'ireo mpitsidika any UK tsy voadinika, ny fe-potoana farany hanaovana fitsapana COVID-19 ratsy dia nahena 48 ora alohan'ny fiaingany ho 24 ora.
Ny fe-potoana farany ho an'ireo mpitsidika tsy voadinika avy any Espana, Portugal, Netherlands, Greece ary Sipra dia nahena hatramin'ny 72 ora ka hatramin'ny 24.
Nanambara ny manampahefana frantsay fa ny mpitsidika tsy voamarina avy any UK, Espana, Portugal, Netherlands, Greece ary Siprus dia tsy maintsy manolotra fanadinana PCR na antigen ratsy ho an'ny COVID-19 izay nalaina latsaky ny 24 ora alohan'ny fiaingany alohan'ny avelany. hiditra Frantsa.
Ho an'ny tsy voamadinika UK mpitsidika, ny fe-potoana farany hanaovana fitsapana COVID-19 ratsy dia nahena 48 ora alohan'ny fiaingany ho 24 ora.
Io fe-potoana io ihany ho an'ireo mpitsidika tsy voamarina avy any Espana, Portugal, Netherlands, Greece ary Sipra dia nahena ho 72 ora hatramin'ny 24.
Ny fanovana ny fepetra takiana amin'ny fidirana dia atao manan-kery amin'ny Alatsinainy 19 Jolay.
Mandritra izany fotoana izany dia nanambara ny praiminisitra frantsay Jean Castex fa esorina ny sabotsy ny fameperana ho an'ireo mpandeha vaksiny.
"Ny vaksinina dia mandaitra amin'ny virus, indrindra ny Delta variant," hoy ny praiminisitra, ary nilaza fa ny mpitsangatsangana avy any amin'ny firenena izay antsoina hoe 'lisitra mena' any Frantsa dia mbola mila mitokana mandritra ny fito andro na dia vita vaksiny aza.
Ny fanovana ny politikan'ny fidirana ao Frantsa dia tonga iray andro taorian'ny nanilihan'ny UK an'i Frantsa tamin'ny drafiny hamelana ireo Britanika vita vaksiny tanteraka hisoroka ny karantina rehefa hiverina avy any amin'ireo firenena 'lisitra amber'.
Ny olona tonga avy any Frantsa dia tsy maintsy mitoka-monina mandritra ny 10 andro ary hizaha toetra indroa noho ny fihanaky ny variana Beta, fantatra amin'ny anarana hoe variana afrikanina tatsimo, hoy ny tompon'andraikitra.
"Nazava foana izahay fa tsy hisalasala handray andraikitra haingana any amin'ny sisin-taninay hampiato ny fiparitahan'ny COVID-19 ary hiarovana ny tombony azo avy amin'ny fandaharan'asan'ny vaksiny mahomby", hoy ny sekretera anglisy UK Sajid Javid.
Ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron dia nilaza tamin'ity herinandro ity fa ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra dia tsy maintsy ampidirina vaksiny alohan'ny 15 septambra, raha ny mpahay siansa ao amin'ny firenena kosa dia nitaky ny hanaovana vaksiny tsy maintsy ataon'ny tsirairay.
Raha ny filazan'ny governemanta, amin'ny ankapobeny, ny 55% amin'ny mponina frantsay dia vita vaksiny feno.
Nanampy sidina vaovao 100 mahery avy any New York i Delta